यिनै रहेछन् भुपेन्द्रलाइ लखेटी लखेटी तड्पाई तड्पाई खुकुरी हानेर हत्या गर्ने मुख्य नाइँके नविन, जस्लाई प्रहरीले खोजिरहेको छ तर पक्राउ गर्न सकेको छैन ! त्यसैले यो न्युजलाई सबैले शेयर गरेर प्रहरीलाई सहयोग गरि पिडित परिवारलाइ न्याए दिलाइदिन मदत गर्नुहोलात्यो रात २७ पटक कस्ले कल गरेको थियो भुपेन्द्रलाई ? – List Khabar
Home / समाचार / यिनै रहेछन् भुपेन्द्रलाइ लखेटी लखेटी तड्पाई तड्पाई खुकुरी हानेर हत्या गर्ने मुख्य नाइँके नविन, जस्लाई प्रहरीले खोजिरहेको छ तर पक्राउ गर्न सकेको छैन ! त्यसैले यो न्युजलाई सबैले शेयर गरेर प्रहरीलाई सहयोग गरि पिडित परिवारलाइ न्याए दिलाइदिन मदत गर्नुहोलात्यो रात २७ पटक कस्ले कल गरेको थियो भुपेन्द्रलाई ?
यिनै रहेछन् भुपेन्द्रलाइ लखेटी लखेटी तड्पाई तड्पाई खुकुरी हानेर हत्या गर्ने मुख्य नाइँके नविन, जस्लाई प्रहरीले खोजिरहेको छ तर पक्राउ गर्न सकेको छैन ! त्यसैले यो न्युजलाई सबैले शेयर गरेर प्रहरीलाई सहयोग गरि पिडित परिवारलाइ न्याए दिलाइदिन मदत गर्नुहोलात्यो रात २७ पटक कस्ले कल गरेको थियो भुपेन्द्रलाई ?
admin November 15, 2021 समाचार Leaveacomment 714 Views
Previous भोलि कार्तिक २९ गते सोमबार ,तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् राशिफल !
Next काठमाडौँको नेपालटार बस्ने अचम्मका युवक पक्राउ, शंका लागेर चेकजाँच गर्दा छक्क पर्‍यो प्रहरी